Indawo epholileyo esecaleni komlambo/indlu yamahlathi emvula ~ Bogie Bungalow - I-Airbnb
Indawo epholileyo esecaleni komlambo/indlu yamahlathi emvula ~ Bogie Bungalow
Ikhabhini efihlakeleyo kwindawo enemithi ecocekileyo elunxwemeni loMlambo iBogachiel, ephakathi phakathi kweFork kunye neHlathi leMvula leHoh, isiqingatha seyure ukusuka elunxwemeni nakwiindledlana zeOlympic National Park. Ibhedi ephindwe kabini / i-queen futon / ii-airbed. Umgodi womlilo womlambo.
I-Bogie Bungalow ibekwe kumbindi wePeninsula ye-Olimpiki, inokufikelela ngokulula kuzo zonke iindledlana ezinkulu kunye neziza i-Olympic National Park ibonelela ~ ngeentaba, imilambo kunye neentlango zolwandlekazi eziyintlango. Jonga "uFikelelo lweeNdwendwe" kwezinye zeendawo endizithandayo!
Nangona akukho TV, ikhabhinethi inayo iDVD/VCR enobonelelo olukhulu lweemovie. I-Wifi ikhona kodwa ibuthathaka.
"Iziko" zombane kwigumbi lokuhlala.
Ngaphandle iinkuni zomlilo zingathengwa kubathengisi abasecaleni kwendlela okanye edolophini.
4.96 out of 5 stars from 860 reviews
4.96 · Izimvo eziyi-860
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi860
Ukuhamba nje ngendlela (Hollow kunye neKallman) yinto ethandekayo, yamava emigca yomthi. Bambalwa abahlali ebumelwaneni - ubukhulu becala iinkampu zokufikelela ekulobeni - ke kuzolile. Ngexesha lasehlotyeni, iityhubhu zangaphakathi zikwindlwana yokudada umlambo okanye ukuqubha "kumngxuma" ophambi kwendlwana. I-elk kunye neenkozi zibonwa rhoqo, kunye ne-elk ngamaxesha athile eyadini.
Uya kuba wedwa ngelixa ukwi-cabin. Nangona sihlala kule ndawo, awusoze usibaleke. Niya kuzijonga (indawo ephambili iza kubhengezwa emva kokuba ugcino luqinisekisiwe) kwaye utshixe nje xa uhamba. Siyathemba ukuba uyakonwabela ukuba bucala kunye nokuzola kwendawo!
Uya kuba wedwa ngelixa ukwi-cabin. Nangona sihlala kule ndawo, awusoze usibaleke. Niya kuzijonga (indawo ephambili iza kubhengezwa emva kokuba ugcino luqinisekisiwe) kwaye utshixe…